ड्रोन खोई ? अमेजनका ग्राहकहरु अझै ड्रोनको प्रतिक्षामा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०२:२५ English
सान फ्रान्सिस्को, १९ मङ्सिर (एपी)। जेफ बेजोसले पाँच वर्षअघि पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो¬– अमेजनका सामग्रीहरु ड्रोनले आजसम्ममा मानिसका घरदैलोमा पु¥याउन थाल्नेछन् । अमेजनका ग्राहकहरु अझै पनि त्यो दिनको पर्खाइमा छन् । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेजोसको त्यो पूर्वानुमान पूरा हुने लक्षण देखिएको छैन ।
१९ मंसिर २०७५, बुधबार २३:५१ मा प्रकाशित